Liyini ikusasa lomkhakha we-ATM? -Izindaba-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Isikhathi: 2020-05-12 Hits: 8
Abathengi bakhokha kancane njalo ngemali nangamakhadi wesikweletu kepha basafuna ukubona ama-ATM amaningi ahanjiswa, ngokusho kwenguqulo yesithupha yombiko we-ATM future Trends, okuyi manje iyatholakala.
Umkhakha Wezokuxhumana weXiangLong unikeza izinhlobo eziningi zekhwalithi ephezulu, engenamanzi, kungalimali Ikhiphedi ye-ATMs. Zonke izinkinobho zenziwe ngokuqina insimbi engagqwali or i-zinc alloy. The ingaphezulu le-inkinobho, isakhiwo kanye nephethini kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Okwedlule: Ikhiphedi ekhanyisiwe yensimbi efakwe kumshini wokuthengisa imaski
Okulandelayo: Kusasele izingcingo ezingama-100,000 ezikhokhelwa eMelika